မြဝတီ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်ဖြစ်သော MYAWADY LIVE ကို မိမိ MOBILE ဖုန်းထဲမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နည်း ~ Zawlin IT World
မြဝတီ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်ဖြစ်သော MYAWADY LIVE ကို မိမိ MOBILE ဖုန်းထဲမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နည်း
11:19 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, software မြို့ တော်, နည်းလမ်းများ No comments
မြဝတီတိုက်ရိုက် အစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှု့ရန် မိမိ mobile ဖုန်းတွင် Android Version 2.3.6 နှင့်အထက် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် မြဝတီမှ Download ပေးသော VPlayer apk ကို
မိမိဖုန်းတွင် Install ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် mobile ဖုန်းအတွင်းမှ VPlayer ကို အောက်တွင် ပြထားသည့် ပုံပါအတိုင်း Setting ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
.Download VPlayer APK
ပထမဦးစွာ VPlayer ကိုဖွင့်ပါ။
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Open URL ကိုဖွင့်ပါ။
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Title တွင် မိမိနှစ်သက်ရာထည့်ပြီး Stream URL တွင် http://www.myawaddy.net.mm/mwdlive ကိုထည့်ပါက မြဝတီ Live အစီအစဉ်ကို Mobile ဖုန်းတွင် ကြည့်ရှု့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Beini Minidwep-gtk ဖြင့် wifi password ရယူနည်း အဆင...
Phone Bill မကုန်အောင် အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း
Facebook ( Nokia App )
မြဝတီ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ် (MWD Live) အား IPhone/Pad/...
FACEBOOK ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ (HOW...
Nokia ဖုန်းများ နေရောင်ခြည်ဖြင့်အားသွင်းနိုင်မည်
မြဝတီ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်ဖြစ်သော MYAWADY LIVE ကို မိ...
LAPTOP အကြောင်းသိကောင်းစရာ တချို
Joboshare Video Converter with keygen +install ထည်...
Sony Xperia Sola MT27i ကို Root လုပ်နည်း
I Mobile istyle 7.1 ကို root လုပ်နည်း